Labo qof oo lagu dilay Bossaso iyo mid kale oo lagu dhaawacay; bilayska oo ku raad-jooga raggii falkaasi gaystay. – Radio Daljir
Luulyo 7, 2011 12:00 b 0
Bossaso, July 07 ? Labo qof oo shacab ah ayaa dhintay mid kalena waa uu dhaawacmay kaddib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen meherad laga cuntooyda oo ku taalla bartamaha magaalada gaar ahaanna aggagaarka suuqa-weyn ee Bossaso.
Mid ka mid ah ragga dhintay waxaa la tilmaamayaa in uu isbitaalka ku geeriyooday kaddib markii la gaarsiiyey isagoo qaba dhaawac xooggan, halka qofka kalena uu ku naf baxay isla goobtii falkaasi ka dhacay.
Raggii gayastay weerarka ayaa la tilmaamayaa in ay isla markiiba baxsadeen, haatanna ay ku daba-joogaan ciidamada ammaanka oo daqiiqado kaddib gaaray goobta ay wax ka dhaceen.
Wali si rasmiga ah uma cadda sababta falkaan ka dambaysa, hase ahaatee warar xog-ogaal ah ayaa tilmaamayaa suurtagalnimada dhacdadaani in ay salka ku hayso arrimo qabiil iyo aanaysi qabyaaladeed.
Baahin: Arbaca, Jul 06, Weriye Madar ~ Daljir ~ Bossaso. Ururka suxufiyiinta Somaliya (NUSOJ) & kan Puntland (MAP) oo si wadajir ah oo beeniyey in weriye Faysal Boston loo masaafurinayo Ethiopia; Afartameeyo ganacsato ah oo lagu xiray degmada Caabudwaaq, Galgaduud; Warbixin ku saabsan nin Somali ah oo lagu soo oogay falal argagixisnimo; Waanwaan laga dhex wado 2 ardaa oo ku dagaalamay gobollada Mudug & Galgaduud.